Igumbi lokulala labucala ukuya kutsho kubantu abayi-5 kuquka iinkonzo eziphezulu - I-Airbnb
Igumbi lokulala labucala ukuya kutsho kubantu abayi-5 kuquka iinkonzo eziphezulu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguAnton
Indlu etofotofo nevulekileyo nenendawo yokuhlala eyahlukileyo ukuya kutsho kwiindwendwe ezintlanu! Kumgangatho ongasentla kukho igumbi lakho labucala elinobubanzi obuyi-50 sqm kunye negumbi lokuhlambela elongezelelekileyo elineshawa. Izixhobo ezifana neTV kunye nebhalkhoni azishiyi nto ifunekayo. Ukusetyenziswa kwekhitshi kuvumelekile ngamalungiselelo. Indawo yokupaka imoto iphambi kwendlu. Ukuzola nokusondela kuMlambo Omkhulu kukwenza uphole ngokukhethekileyo xa uhleli. Kwakhona uza kufumana iindledlana ezifanelekileyo ngemoto kwimizuzu embalwa.
Izixhobo ezisisiseko ezifana nelinen ecocekileyo yebhedi, iitawuli kunye ne-shower gel (xa icelwa) ziyafumaneka. Kukho ibhalkhoni, i-TV ene-satellite, isofa etofotofo, iibhedi ezimbini (ibhokisi entwasahlobo ye-180cm kunye nobukhulu be-160cm), iwardrobe enesipili. Ukucoceka kubalulekile kuthi, igumbi licocwa kakuhle ngaphambi kokufika ngakunye, ilineni yebhedi yenziwe kakuhle yaza yafakwa iitawuli ezicocekileyo. Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngeepleyiti, iikomityi nezinto zokuhombisa. Kwi-Anteroom kukho i-microwave, ifriji, umatshini wokwenza ikofu kunye neketile esetyenziswa simahla. Igaraji iyabhatalelwa, indawo yokupaka evulekileyo ayibhatalelwa.
I-Kahl iphawulwe ngeflethi encinci. I-Frankfurt ikumgama wemizuzu eyi-30 kuphela ngemoto okanye ngetreyini. IHanau ingafikelelwa kwimizuzu engaphantsi kwe-15. Uza kufumana indawo yokukhempisha kufutshane, kunye nomlambo iMain.
Ndifumaneka nanini na, xa ndifunwa ngumntu okanye ku-hatsapp.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kahl am Main